Harem-bako-pirenena: mahazo fankatoavana vao azo atao ny fanorenana sy ny fanarenana | NewsMada
Harem-bako-pirenena: mahazo fankatoavana vao azo atao ny fanorenana sy ny fanarenana
Par Taratra sur 22/05/2020
Raha ny fampitam-baovao nomen’ny talen’ny Fifandraisana amin’ny daholobe, eo anivon’ny minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina, ny 20 mey teo: “ ny minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina no tompon’andraikitra amin’ny fitantanana ny harem-bako-pirenena izay miisa 177 ankehitriny”. Tafiditra ao anatin’ity taratasy fampitam-baovao ity ny filazana fa “ny tranoben’ny Paositra Antaninarenina dia tsy ao anatin’ny boky fitanisana ny harem-bako-pirenena sady tsy ao anatin’ny lisitra mirakitra ny harem-bakom-pirenena tantanan’ny minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina.
Mbola voalaza ao anatin’ity fampitam-baovao ity ihany koa ny momba ny lapan’Ambohitsorohitra sy ny Rovan’Antananarivo. “Mikasika ny lapan’Ambohitsorohitra kosa, tsara ny mampahafantatra fa tsy ny trano lehibe no amboarina fa ireo fanorenana eo amin’ny fefy izay efa mihasimba sy atahoraha hihotsaka”. Momba ny Rovan’Antananarivo, araka ny fampitam-baovao hatrany: “ny Rovan’Antananarivo sy ny Lapa Manjakamiadana kosa dia misy rafitra natsangana izay natao hoe Komity Siantifika ka ivondronan’ny mpahaitantara, ny mpahaigolantany sy ny mpahaimozea. Noho izany, tsy misy asa fanarenana na fanorenana azo atao raha tsy mahazo ny fankatoavan’io komity io”.
Nanterin’ity fampitam-baovao ity fa: “ny fitantanana an’ireo tranom-panjakana voatanisa teo ireo hatramin’izao dia tsy mivaona fa manaraka ny fenitra tokony ho izy avokoa. Tsy afaka hanatanteraka asa fanarenana ny tompon’andraikitra tsirairay raha tsy mahazo fankatoavana avy amin’ireo matihanina amin’ny fitantanana harembakoka”.